Man City oo hoggaanka u qabatay horyaalka Premier League kaddib markii ay si sahlan kaga soo adkaatay Watford oo ay booqatay… +SAWIRRO – Gool FM
(Watford) 04 Dis 2021. Manchester City ayaa guul ay u qalantay ka soo gaartay kooxda Watford oo ay booqatay, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-3, ciyaar qeyb ka ahayd kulammada toddobaadka 16-aad ee horyaalka Premier League, taasoo ka dhigtay in City ay kala wareegtay hoggaaminta horyaalka.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 0-2 ay ku hoggaamineysay kooxda martida ahayd ee Manchester City.
Daqiiqadii 4-aad ee bilowgii ciyaarta Manchester City ayaa hoggaanka qabatay waxaana 0-1 ka dhigay laacibkooda Raheem Sterling oo caawinta goolkan ka helay saaxiibkiis Phil Foden.
31 daqiiqo marka ay dheesha mareysay Bernardo Silva ayaa wuxuu ciyaarta ka dhigay 0-2 ay ku hoggaamineysay kooxda Manchester City.
Bernardo Silva oo caawin ka helay saaxiibkiis Walker ayaa wuxuu hoggaanka u sii dheereeyay kooxdiisa Manchester City wuxuuna dheesha ka dhigay 0-3.
Daqiiqadii 74-aad kooxda Watford ayaa dhalisay gool, waxaana ciyaarta 1-3 ka dhigay ciyaarta laacibkooda Cucho Hernández.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku dhammaatay 1-3 ay kaga soo adkaatay Man City kooxda Watford oo ay ku booqatay Vicarage Road Stadium, ciyaar qeyb ka ahayd kulammada Isbuuca 16-aad ee horyaalka Premier League.